မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ သတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုတွေ က ဘာတွေပါလဲ ?
ဖြေ : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှ နေ့စဉ် ဘောလုံးသတင်းအစုံအလင်နှင့် အခြားအားကစားသတင်း များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပါတယ်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ ?
ဖြေ : ဘောလုံးစတားဝန်ဆောင်မှုကို မိမိရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ တို့ကနေ ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပြီး နေ့စဉ် သတင်းများကို အကန့်အသတ် မရှိဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။
မေး : ဘောလုံးစတား မှ သတင်းအသစ်တွေကို နေ့စဉ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဖတ်လို့ ရလဲ ?
ဖြေ : ဘောလုံးစတား မှ သတင်းအသစ်တွေကို နေ့စဉ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖတ်နိုင်ရန်အတွက် ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုကို (www.ballonestar.com) မှာ ဝင်ရောက် ရယူပြီး နေ့စဉ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သည့်နေရာမှ ရယူနိုင်ပါလဲ၊ ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်မလဲ ?
ဖြေ : ဘောလုံးစတားဝန်ဆောင်မှု အား အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ရယူနိုင်ပါသည်။ (1)	MPT လိုတရ Web Portal မှ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ် (http://bs.lotayamm.com) (2)	Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် Google Play Store မှ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် (3)	BalloneStar Web Portal (www.ballonestar.com) မှတဆင့်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ.် (4)	MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 8118 သို့ DD ဟုစာတိုပေးပို့ကာ အခမဲ့ Download link ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးပါက မိမိ အသုံးပြုနေသော ဖုန်းထဲသို့ Install ပြုလုပ်ကာ ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှ သတင်းတွေ နေ့စဉ် ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ ဝန်ဆောင်ခ ဘယ်လို ကောက်ခံ ပါသလဲ ?
ဖြေ : သတင်းဝန်ဆောင်ခ အတွက် တစ်ရက်လျှင် ၁၀၅ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လျှင် ၅၂၅ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖြေ : ဝန်ဆောင်မှု ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ မိမိ ရယူ လိုသောဝန်ဆောင်မှုအတွက် 8118 သို့ MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် စာတိုပေးရပါမည်။ ၁ ရက်ဝန်ဆောင်မှု အတွက် DD ၊ ၁ ပါတ်ဝန်ဆောင်မှု အတွက် WW ဟုစာတို ပေးပို့ပါ။
ဖြေ : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှ ဝန်ဆောင်မှုများ ရပ်တန့်လိုပါက 8118 သို့ “DD OFF” ဟု စာတို ပေးပို့ ပေးရပါမည်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ ဝန်ဆောင်မှု ရပ်တန့်ပြီးမှ ဘောလုံးစတား၏ ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်ရယူလိုလျှင် ဘယ်လို လုပ်ရမှာလဲ?
ဖြေ : ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လည်ရယူလိုပါက 8118 သို့ DD ဟုစာတို ပေးပို့ကာ ပြန်လည် ရယူ နိုင်ပါသည်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ သိချင်တာရှိရင် ဘယ်လိုစုံစမ်းရမလဲ။
ဖြေ :MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် 8118 သို့ HELP ဟု စာတို ပေးပို့ကာ အကူအညီ ရယူ နိုင်ပါသည်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ ဘာသတင်းတွေ ပါဝင်မှာလဲ ?
ဖြေ : Ballone Star တွင် ပွဲစဉ်ဇယားများ၊ ပွဲစဉ်ရလဒ်များ၊ ပွဲပြီးသတင်းများ၊ ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်များ၊ ပွဲကြိုခန့်မှန်းချက်များ၊ ပြိုင်ပွဲတစ်ခု၏ အကောင်းဆုံး အမှန်ဆုံး ၃ပွဲ ခန့်မှန်းချက်များ၊ အသင်းတိုင်း၏ ခန့်မှန်း ကစားကွက်၊ လူစာရင်းများ၊ ဒဏ်ရာရ၊ ပွဲပယ် ခံရသူများ အကြောင်း၊ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လာလီဂါ၊ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ၊ စီးရီးအေ၊ လီဂူး၊ ချန်ပီယံလိဂ်၊ ယူရိုပါလိဂ် အစရှိသည့် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး လိဂ်ကြီးများ၏ သတင်းအပြည့်အစုံ၊ အကြိုက်ဆုံးပွဲ ၊ ဆောင်းပါးများ ၊ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲများ ၊ ရုပ်သံပြကွက်များ စသည်တို့ကို စုံလင် ပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုက သတင်းတွေ ကို တစ်ခြားဘယ်နေရာမှာ ဖတ်ရှုလို့ ရနိုင်သေးလဲ ?
ဖြေ : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှ သတင်းများ အားလုံးသည် နိုင်ငံတကာ၏ ဘောလုံး သတင်းဌာန များမှ တဆင့် ဝယ်ယူကာ တရားဝင် လွှင့်တင် ပေးထားသည့်အတွက် ဘောလုံးစတား ဝက်ဘ်ပေါ်တယ် www.ballonestar.com နှင့် ဘောလုံးစတား မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတို့ တွင်သာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့် စုံလင်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်မှာပါ။ ဘောလုံးစတား၏ facebook စာမျက်နှာနှင့် လိုတရ ဝက်ဆိုဒ်တို့တွင်လဲ ဘောလုံးစတား သတင်းဌာနမှ ဘောလုံး သတင်း တစ်ချို့ ဖော်ပြပေးပါတယ်။
ဖြေ : သတင်းများအတွက် တစ်ရက်ကို 20 MB မှ 50 MB ဝန်းကျင် ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး ဗီဒီယို သတင်းများအတွက် တော့ မိမိ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့သည့် သတင်းပေါ်မူတည်ပြီး ဒေတာ MB ကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ သတင်းတွေကနေ့စဉ် အသစ်တင်ပေးမှာလား၊ တနေ့ ဘယ်နှစ်ပုဒ် လောက် တက်မှာလဲ ?
ဖြေ : သတင်းများကို နေ့စဉ် အချိန်နှင့်အမျှ အသစ်တင်ပေးပါသည်၊ တစ်နေ့တာအတွက် ဗီဒီယိုသတင်းအပါအဝင် သတင်းအားလုံးစုစု ပေါင်း အနည်းဆုံး ၄၀ မှ ၆၀ ပုဒ်အထိ တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ ဘောလုံးပွဲတွေရော လောင်းလို့ရပါသလား ?
ဖြေ : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ ဘောလုံးပွဲ လောင်းကစား “လုံးဝ” လုပ်လို့မရပါဘူး။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ ဘောလုံးပွဲတွေ ကို Live ကြည့်လို့ ရလား?
ဖြေ : လောလောဆယ် ကြည့်လို့ မရသေးပါဘူး၊ နောက်ပိုင်းမှာ ကုန်ကျမှု သက်သာစွာဖြင့် Live ကြည့်ရှု့လို့ ရနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ ပါဝင်သည့် ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲဆိုတာ ဘာလဲ?
ဖြေ : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှု၏ ဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူများကို ကျေးဇူး တုန့်ပြန်သော အနေဖြင့် Lucky Draw အစီအစဉ်များ ထည့်သွင်းထားချင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ အပြင် အခြားသော အစီအစဉ် အသစ်များကိုလည်း အလျှင်းသင့်သလို စီစဉ် ထည်သွင်း ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ ယခုပါဝင်သော ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲက အဖြေမှန်တဲ့သူကို ဘာပေးတာလဲ ?
ဖြေ : ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲတွင် အဖြေမှန်သူများကို Lucky Draw အစီအစဉ်တွင် ကြေငြာထားသည့်အတိုင်း ရွေးချယ်ပြီး ဆုလက်ဆောင်များ ပြန်လည်ပေးအပ်သွားပါမည်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ ဆုလက်ဆောင်က ဘာတွေလဲ ?
ဖြေ : ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ ဆုလက်ဆောင်တွေကတော့ ဘောလုံးစတား ၏ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲတွင် ခန့်မှန်းရလဒ် (၁၀)ပွဲထိ မှန်ကန်အောင်ခန့်မှန်းနိုင်သူ များထဲမှ(၁)ဦးကို ပထမဆု အတွက် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ကျန် (၁၀)ပွဲမှန်သူများနှင့် (၉)ပွဲထိ မှန်ကန်အောင်ဖြေဆိုနိုင်သူများ ထဲမှ (၁၀) ဦးကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး ဒုတိယဆု ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းရလဒ် (၆)ပွဲ၊ (၇)ပွဲ၊ (၈)ပွဲ ထိမှန်ကန်အောင်ခန့်မှန်းနိုင်သူများထဲမှ (၅၀) ဦးကိုမဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး တတိယဆု ချီးမြှင့် ပေးသွားပါမည်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲက နေ့စဉ်ရှိတာလား ?
ဖြေ : ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲက တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အခြား Lucky Draw အစီ အစဉ် များ ထည့်သွင်းပေးသွား ပါမည်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာ အခြား ဘာပြိုင်ပွဲတွေ ၊ အစီအစဉ်တွေ ရှိသေးလဲ ?
ဖြေ : ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲအပြင် ၊ Live TV Program အစီအစဉ်များ၊ ဘောလုံးအသင်းများ၏ Fun များနှင် တိုက်ရိုက် တွေ့ဆုံမေမြန်းချင်း နှင့် အခြား Lucky Draw အစီအစဉ် များကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဘောလုံးစတား Facebook Page တို့မှာ အစီအစဉ်မတိုင်မီ ကြိုတင် အသိပေး အကြောင်းကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှု၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုဖို့ အခြား ဆင်းမ်ကတ် တွေနဲ့ရော မရဘူးလား ?
မေး : ဘယ်ဖုန်းမဆို အသုံးပြုလို့ ရလား?
ဖြေ : ဘယ်ဖုန်းနှင့်မဆို ဘောလုံးစတား ဝက်ဘ်ပေါ်တယ် www.ballonestar.com မှာ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဘောလုံးစတား အက်ပလီကေးရှင်းကိုတော Android ဗားရှင်း 4.0 နှင့်အထက် မည်သည့်ဖုန်းနှင့်မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဖြေ : iphone အတွက် အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘောလုံးစတား ဝက်ဘ်ပေါ်တယ် www.ballonestar.com မှာ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
မေး : ဘောလုံးစတား ဝန်ဆောင်မှုမှာနေ့စဉ်တင်တဲ့ သတင်းတွေကို အခြား Social လူမှုကွန်ယက် တွေမှာ ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြလို့ရနိုင်မလား ?
ဖြေ : သတင်းများကို အခြား Social Network နှင့် အခြား Media များ တွင်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း၊ တဆင့် ပြန်လည် ရောင်းချခြင်း များကို “လုံးဝ” ခွင့် မပြုပါ။